အ ခုေ ခတ် ကျောင်းသား/သူ များအတွက် ဆရာမတစ်ဦး ရဲ့ ထိရောက် တဲ့ ပညာပေး သင် ခန်းစာ – Shwewiki.com
အ ခုခေတ် ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ပညာပေး သင်ခန်းစာ
“သဉ္ဇာဝင့်ကျော်က လှလို့ပြတာပဲ ဘာဖြစ်လဲ ဆရာမရယ်”
“ဆဲတာ သူများပစ္စည်းခိုးတာမှ မဟုတ်တာ မရှက်ပါဘူး ဆရာမ”
ယနေ့ ကျွန်မရဲ့ပညာဒါနက ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ထဲက အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပါ။
ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေကို Physics ပုစ္ဆာ တွက်ပြနေစဉ်မှာ နောက်ဘက်တန်းနားက ” ငါ… မသား”လို့ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဆဲလိုက်တဲ့အသံကို ကြားမိတယ်။ ဖြတ်ကနဲလှည့်အကြည့် ကျောင်းသားချင်း စနောက်ရင်း ဆဲလိုက်တာပါတဲ့။
“သားရယ် မဆဲရဘူး. ဆဲတယ်ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်သာမက မိဘရော ဆရာကိုပါ သိက္ခာကျစေတယ်။ ရှက်ပါကွယ်”လို့ ပြောတော့ “မရှက်ပါဘူး ဆရာမရယ်… ဆဲတာ သူများပစ္စည်းခိုးတာမှ မဟုတ်ပဲ”တဲ့….
“ဟင်… မင်းပြောပုံက သဉ္ဇာဝင့်ကျော်လိုပါလား “လို့ ပြောလိုက်မိတော့ မိန်းကလေးတန်းဘက်က ကျောင်းသူတစ်ယောက်က “ဆရာမကလဲ သဉ္ဇာက လှလို့ပြတာပဲ အနုပညာလေ”တဲ့။
“NO NO ဒါအနုပညာ မဟုတ်ပါ။ အနူမတောင် ဒါမျိုး မပြပါဘူးကွယ်”လို့ ပြန်ပြောမိတော့ “အနူမက လှမှမလှပဲတဲ.”လေ။ ကျွန်မ နားတွေခေါင်းတွေပူတဲ့အထိ စိတ်ထဲ ထောင်းခံစားလိုက်ရတယ်။
“ကောင်းပြီ … အခုပြောနေတဲ့ သမီးလေးက ၁၆ နှစ်. သဉ္ဇာဝင့်ကျော်က ၃၀ကျော်နေပြီ သမီးက သူ့ထက်ပိုလှတယ်။ သိပ်ကိုလှပါတယ်သမီး လာပါ။ ဆရာမဘေးကို လာပါ။ လှလို့ပြတာပဲဆို လာပြပါ”လို့…
ကျွန်မ သူမမျက်လုံးကိုသေချာ စိုက်ကြည့်ပြီး လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ တစ်တန်းလုံး အပ်ကျသံကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ် သွားပါတယ်။ “လာပါ… ဒီတစ်တန်းလုံးက ကျောင်းသူတွေ အကုန်လှကြပါတယ်။ လာပါ။ ပြချင်သလား? ပြရဲသလား?” ဆိုတော့
ရင်ဖုံးအကျီ် င်္အဖြူလေးတွေပေါ် လက်ကလေးတွေ ယှက်လို့ “မပြချင်ပါ မပြရဲပါ ဆရာမ”တဲ့။ “မှတ်ထား လောကပါလတရားနှစ်ပါးဆိုတာ သိသလား” ဆိုတော့ “မသိပါ”တဲ့။
”ဟီရိ သြတပ္ပ””မကောင်းမှုပြုလုပ်ရန် ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်း”လို့ “အသိစိတ်များလေ လူ့အဆင့်အတန်းမြင့်လေ။ ” “လောကပါလတရားကို လိုက်နာလေ မိမိနဲ့မိမိဝန်းကျင် တိုးတက်လေ။”
“ခွေးသားပေါက်လေးတွေကို နို့တိုက်နေတဲ. ခွေးမိခင်ဟာ နို့ကြီးရှစ်လုံး ဘတ်လတ်ပြူးနေပေမယ့် အဝတ်ဝတ်ရကောင်းရယ်လို့ သိလည်းမသိ ဝန်းကျင်ကလည်း ခွေးကို အဝတ်ဝတ်ထားရမယ် ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်လည်းမသတ်မှတ်။ သူက တိရစ္ဆာန်level.”
“လူဖြစ်ပါလျှက် လှလို့ပြတာပါ ဆိုပြီး ဖုံးကွယ်သင့်တဲ့ အရာတွေကို ပြသနေတာ အနုပညာမဟုတ် အရှက်မဲ့တာ”လို့။ သူတို့လေးတွေအားလုံး အတွေးကိုယ်စီနဲ့ ကျန်ခဲ့ကြတယ်။
အတန်းထဲကအထွက် ကျွန်မ ကျောင်းရုံးခန်းကိုဝင်ပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကို အကြောင်းစုံ ပြောပြလိုက်မိတယ်။ ကိုယ်ကျင့်သီလ စာရိတ္တကို အထူးမြှင့်တင်ဖို့.…
ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ အသိတွေကို အဆုံးအမတွေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့ ဟောပြောပွဲတစ်ပွဲ လုပ်ဖြစ်တော့မယ်ရှင့်။
ယနေ့ …ရင်မောသည် မျက်ရည်ဝဲသည် အိမ်ရောက်တော့ ကျွန်မ ငိုမိသည်။ အေးသန္တာထက် / မေတ္တာလင်္ကာပညာရေး ပရဟိတအသင်း / လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
အခုခတျေ ကြောငျးသား/သူမြားအတှကျ ဆရာမတဈဦးရဲ့ ထိရောကျတဲ့ ပညာပေး သငျခနျးစာ
“သ ဉ်ဇာဝငျ့ကြျောက လှလို့ပွတာပဲ ဘာဖွဈလဲ ဆရာမရယျ”
“ဆဲတာ သူမြားပစ်စညျးခိုးတာမှ မဟုတျတာ မရှကျပါဘူး ဆရာမ”
ယနေ့ ကြှနျမရဲ့ပညာဒါနက ကွညျ့မွငျတိုငျမွို့နယျထဲက အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးတဈကြောငျးမှာပါ။
ဆယျတနျးကြောငျးသားတှကေို Physics ပုစ်ဆာ တှကျပွနစေဉျမှာ နောကျဘကျတနျးနားက ” ငါ… မသား”လို့ ပဈပဈနှဈနှဈ ဆဲလိုကျတဲ့အသံကို ကွားမိတယျ။ ဖွတျကနဲလှညျ့အကွညျ့ ကြောငျးသားခငျြး စနောကျရငျး ဆဲလိုကျတာပါတဲ့။
“သားရယျ မဆဲရဘူး. ဆဲတယျဆိုတာ မိမိကိုယျတိုငျအတှကျသာမက မိဘရော ဆရာကိုပါ သိက်ခာကစြတေယျ။ ရှကျပါကှယျ”လို့ ပွောတော့ “မရှကျပါဘူး ဆရာမရယျ… ဆဲတာ သူမြားပစ်စညျးခိုးတာမှ မဟုတျပဲ”တဲ့….
“ဟငျ… မငျးပွောပုံက သ ဉ်ဇာဝငျ့ကြျောလိုပါလား “လို့ ပွောလိုကျမိတော့ မိနျးကလေးတနျးဘကျက ကြောငျးသူတဈယောကျက “ဆရာမကလဲ သ ဉ်ဇာက လှလို့ပွတာပဲ အနုပညာလေ”တဲ့။
“NO NO ဒါအနုပညာ မဟုတျပါ။ အနူမတောငျ ဒါမြိုး မပွပါဘူးကှယျ”လို့ ပွနျပွောမိတော့ “အနူမက လှမှမလှပဲတဲ.”လေ။ ကြှနျမ နားတှခေေါငျးတှပေူတဲ့အထိ စိတျထဲ ထောငျးခံစားလိုကျရတယျ။
“ကောငျးပွီ … အခုပွောနတေဲ့ သမီးလေးက ၁၆ နှဈ. သ ဉ်ဇာဝငျ့ကြျောက ၃ဝကြျောနပွေီ သမီးက သူ့ထကျပိုလှတယျ။ သိပျကိုလှပါတယျသမီး လာပါ။ ဆရာမဘေးကို လာပါ။ လှလို့ပွတာပဲဆို လာပွပါ”လို့…
ကြှနျမ သူမမကျြလုံးကိုသခြော စိုကျကွညျ့ပွီး လှမျးချေါလိုကျတယျ။ တဈတနျးလုံး အပျကသြံကွားရလောကျအောငျ တိတျဆိတျ သှားပါတယျ။ “လာပါ… ဒီတဈတနျးလုံးက ကြောငျးသူတှေ အကုနျလှကွပါတယျ။ လာပါ။ ပွခငျြသလား? ပွရဲသလား?” ဆိုတော့
ရငျဖုံးအကျြီ င်ျအဖွူလေးတှပေျေါ လကျကလေးတှေ ယှကျလို့ “မပွခငျြပါ မပွရဲပါ ဆရာမ”တဲ့။ “မှတျထား လောကပါလတရားနှဈပါးဆိုတာ သိသလား” ဆိုတော့ “မသိပါ”တဲ့။
”ဟီရိ သွတပ်ပ””မကောငျးမှုပွုလုပျရနျ ရှကျခွငျးကွောကျခွငျး”လို့ “အသိစိတျမြားလေ လူ့အဆငျ့အတနျးမွငျ့လေ။ ” “လောကပါလတရားကို လိုကျနာလေ မိမိနဲ့မိမိဝနျးကငျြ တိုးတကျလေ။”
“ခှေးသားပေါကျလေးတှကေို နို့တိုကျနတေဲ. ခှေးမိခငျဟာ နို့ကွီးရှဈလုံး ဘတျလတျပွူးနပေမေယျ့ အဝတျဝတျရကောငျးရယျလို့ သိလညျးမသိ ဝနျးကငျြကလညျး ခှေးကို အဝတျဝတျထားရမယျ ပတျဝနျးကငျြက သတျလညျးမသတျမှတျ။ သူက တိရစ်ဆာနျlevel.”
“လူဖွဈပါလြှကျ လှလို့ပွတာပါ ဆိုပွီး ဖုံးကှယျသငျ့တဲ့ အရာတှကေို ပွသနတော အနုပညာမဟုတျ အရှကျမဲ့တာ”လို့။ သူတို့လေးတှအေားလုံး အတှေးကိုယျစီနဲ့ ကနျြခဲ့ကွတယျ။
အတနျးထဲကအထှကျ ကြှနျမ ကြောငျးရုံးခနျးကိုဝငျပွီး ကြောငျးအုပျဆရာမကွီးကို အကွောငျးစုံ ပွောပွလိုကျမိတယျ။ ကိုယျကငျြ့သီလ စာရိတ်တကို အထူးမွှငျ့တငျဖို့.…
ကြောငျးသူကြောငျးသားလေးတှရေဲ့ အသိတှကေို အဆုံးအမတှနေဲ့ ပွောငျးလဲပေးနိုငျဖို့ ကြှနျမတို့ ဟောပွောပှဲတဈပှဲ လုပျဖွဈတော့မယျရှငျ့။
ယနေ့ …ရငျမောသညျ မကျြရညျဝဲသညျ အိမျရောကျတော့ ကြှနျမ ငိုမိသညျ။ အေးသန်တာထကျ / မတ်ေတာလင်ျကာပညာရေး ပရဟိတအသငျး / လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ ပေးပါသညျ။
၇​ရက် သားသမီး နေ့နံအ လိုက် အကျိုးပေးဂဏန်း နဲ့ အရောင် များ